alldayniie.com » Sawiro: Turkiga oo Xukuumadda Soomaaliya ku wareejiyay Qalab casri ah
Sawiro: Turkiga oo Xukuumadda Soomaaliya ku wareejiyay Qalab casri ah
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta kala wareegay qalab casri ah oo ka soo saaraya badda gunteeda Maraakiibt ku burburta Biyaha Badda iyo qashinka ku dhex jira shirkadda Albeyrak ee dalka Turkiga.
Qalabkan cusub oo ay keentay shirkadda Albeyrak ee ka howlgasha Dekadda Muqdisho ayaa waxaa goob joog ka ahaa goobta lagu daah furayay Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Marwo Maryan Aweys Jaamac,mareeyaha Dekadda ee shirkadda Albeyrak,Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda.
Qalabkaan ayaa ah mid muhiim ah gaar ah uleh Dekadda Muqdisho,taasi oo Maraakiibta Xamuulka ah ay ku soo xiran karaan,islamarkaana dakhli xoogan ka soo xaroon doonaan sida ay mas’uuliyiinta Dowladda sheegeen.
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay iney ku faraxsan yihiin in maanta ay daah furaan qalabka caro saarka iyo qashin saarka Dekadda Muqdisho.
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Maryan Aweys Jaamac,ayaa tilmaantay in hadda ay gacanta ku hayaan nidaamkii lagu maamuli lahaa maaliyadda iyo qaabkii loo jiheyn lahaa Maraakiibta Dekadda ku soo xirata.
The post Sawiro: Turkiga oo Xukuumadda Soomaaliya ku wareejiyay Qalab casri ah appeared first on Caasimada Online.